Eminyakeni embalwa eyedlule kwakunzima nakakhulu ukucabanga ukuthi kwabesifazane i-Iroquois hairdo izobe iyamukeleka futhi iyinhle kakhulu, ngoba ngaphambili kwakungumthetho wabantu abangahlelekile. Namuhla, ngenxa yokwahluka kwenhle kwekhanda lezinwele, ungakha izithombe ezibukhali nezikhangayo.
Cishe noma yikuphi ukunqunywa kwezinwele zowesifazane kuthatha ukuthi izinwele zezinwele njenge-Iroquois enzima zizobukeka zangempela. Noma kunjalo, izinguquko zamakhadikhadi ekubukeni ziholela ekushintsheni empilweni. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi kubaluleke kakhulu ukuhlola ukuzwa ukuthi lekhanda lezinwele linganikeza ngaphambi kokuya saloni. Ungawaphuzi ngokushesha izinwele ezivela emathempelini bese ubeka indwangu enkulu. Kungcono kakhulu ukuqala "zama" ngesithombe, futhi ngale njongo isitayela sezinwele ze-Iroquois esihle kakhulu esifaneleka, esingenziwa ngezinwele eziphakathi nezinwele. Umdwebi onolwazi uzothatha izinwele ezithempelini zakhe, azihlanganise kahle, futhi azonikeza ivolumu engxenyeni eyinhloko, eboshiwe ebunzini kuze kube ngemuva kwekhanda. Umphumela ofanayo wokubukwa ungatholakala ngokusebenzisa i-lacquer noma i-gel ekhethekile yezinwele. Lolu khetho lwenziwa ngabadumile abaningi, futhi ubusika obusika be-Iroquois "umvakashi" ovame ukwenziwa emaphepheni obomvu.
Ukuqiniseka ngokuqinile ukuthi i-Iroquois - ukuthi izinwele ezithandwe yisikhathi eside, unganquma ngesinqunto esifanayo. Kulesi simo, izinwele ezivela emathempelini zihlungiwe, zishiya indwangu enkulu engayitholakalanga. Kumele uqaphele ukuthi ama-blondes kuzodingeka afake noma agwebe izinwele ezimnyama engxenyeni yengxenye yekhanda, ukuze izinwele zibukeke zivumelana.
Yilungiselele ukuthi njalo ekuseni kuzodingeka uchithe isikhathi esiningi ubeke, kodwa umphumela uyakufaneleka. Akulungele ukuchitha isikhathi esiyigugu ekuseni ukuze udale i-hairstyle? Okunye okuhle kakhulu yi-Iroquois haircut ngezinwele ezilinganayo emhlabeni wonke. Ngaphandle kokugxila, lokhu kunqunywa kufana nobhontshisi beklasi. Ukuya ehhovisi lapho i-Iroquois ingekho khona, kwanele ukubeka izinwele nge-hairdryer noma wenze izindandatho zothando.
Iroquois idinga ukhetho olufanele lwezambatho zokugqoka. Isisombululo esihle kakhulu isitayela se-kazhual, unisex nesasempi. Ukupheka kufanele kube okufanelekile, ngoba akunakwenzeka ukuhlala ungaboniwe nge-hairdo enjalo!
Ukugcoba - Spring 2016
Izindezi zebesifazane ezinomfashini 2016
Izitayela zefashini - entwasahlobo-ehlobo 2016
Ukuguqulwa komuthi we-2017 - izitayela zemfashini, izitayela, imibala, imibono
Izitayela eziphathekayo zokugqoka 2014
Ama-sneakers New Adidas 2016
Izingubo - Spring 2014
I-Phenibut - izinkomba zokusetshenziswa
I-Bodyflex ne-Marina Korpan
Isaladi ngemifula kanye nenkukhu
Izesekeli zokugeza nama-saunas
I-Ankle Bandage - Imithetho Yokukhetha Nokusebenzisa
Inani lomsoco wobisi
Imithetho yokudlala i-backgammon ende
Ukuhlanganiswa kwemibala ezembatho - okwesibhakabhaka
Imiphi imikhiqizo equkethe i-chrome?
I-Craftwork kusuka kugobolondo le-walnut
Indawo yokubeka izitofu enezandla
Yini yokugeza izinto zoboya?
Udonsa we-Duck kuhhavini
Izandla kusuka ku-cork